May 16, 2021 Xuseen 2
Puntlandtimes (QARDHO)-Madaxweyne ku-xigeenka ahna ku-simaha Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa saakay gaaray Magaalada Qardho ee xarunta Gobolka Karkaar ee Puntland.
Safarka Axmed Karaash ee magaalada Qardho ayaa waxa uu salka ku hayaa ka qeyb galka Munaasabad lagu daah-furayey barnaamijka diiwaan-gelinta codbixiyaasha saddexda degmo ee Eyl, Ufayn iyo Qardho, taasi oo lagu qabtay magaalada Qardho.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa kulamo la qaadan doona Maamulka degmada, Odayaasha dhaqanka iyo Guddiga doorashooyinka Maamulka, isagoo kala hadli doona Doorashooyin tijaabo ah oo qof iyo Cod oo dhawaan lagu qaban doono Qardho.
Diiwaan-gelinta Codbixiyeyaasha ayaa socon doonta tan iyo 29 bishan May, waxaana laga sameyn doonaa in ka badan 40 goobood oo ka tirsan degmooyinka Eyl, Ufayn iyo Qardho, sida uu qorshau yahay, waxaana doorashada ay noqoneysaa mid tijaabo ah.
Axmed Karaash ayaa saakay markii uu gaaray Magaalada waxaa kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan Wasiiro, Xildhibaanno, Saraakiil Ciidan iyo maamulka Qardho iyo kan Gobolka Karkaar ee Puntland.
HANBAYLO HANBALYO HANBAYLO! Waar waa odaygii Amxed ahaa oo maanta xeradii ARIGA ee reer Gadhoowe laga soo foofiyay!!!
Qof iyo Cod bay baratay. Waar waa marshuuc lacago lagaga cuno qolyaha Xalane fadhiya. Hargaysaa xoogaa lacago ah kaga cunta qolyahaas, tanna tiibay daba socotaa. Maxaa qof iyo cod ah FUTADOODAA BUUHOODLE ka muuqatee. Wax kale garan aan maayo e, waxa aan reer Garoowe u sheegi lahaa in ay odayga Amxed ah timahaa CAD ka madoobeeyaan ama ka caseeyaan. Cod & Qof lagu lahaa!!!!
Waxa kale oo ii muuqday kooxdii uu AMIN CAAMIR u bixiyey MIDAWGA-BARAKICINTA oo weli wada waraaqahoodii. Waxa ay hadda ku HADAAQAYAAN in ay Rooble ka shakisan yihiin, waayo ra’iisal wasaaraha kharanka & madaxweynaha kharanku ma is dagaalsana! Sidaa daraadeed, kaliya waxa aan Rooble aamini karnaa haddii ay Farmaajo islaayaan! Waa sida waraaqdooda & habdhaqankoora laga fahmi karo.
Gunaanadkii, cod & qof haynoo danbeeye e, Qardho fatahaadaha qorshe hallooga sameeyo; siXir barar & maamul xumada kaloo dhan halkaa iska dhig. Marshuuc shasiyaad lacag ka smaynayaan wax micna ah oo uu xaaladda ka beddelayaa majidho, iyada oo dadka & deegaankuba arradan yahay. Oo uu ka arradan yahay maamul wanaag, caddaalad, isla xisaabtan, daah-furnaan, baahiyaha aasaasiga ah & horumar la taaban karo.
Wixii qadaf ah qolyaha aad la hadlayso ayaa kaaga jawaabi doona, laakiin waxaan anigu aaminsanahay in odaygu timihiisaas cad ilaahay ku yaqaan.